रवि लामिछानेकाे जवाफ : के म वितिसकेको जीवन बारे आजीवन जवाफ दिएर बसुँ
काठमाडौं । सिधाकुरा जनतासँगका प्रस्तोता रवि लामिछाने नियमित कर्ममा फर्किएका छन् । अदालतबाट धराैटीमा रिहा भएपछि सिधा कुरा जनतासँगको तयारीमा उनी लागेका छन् । उनले आफ्ना व्यक्तिगत जीवनबारे पटकपटक खेदाे खनिएकाे भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । रविले सञ्चारमाध्यममा पुर्व पत्नीलाइ प्रयाेग गरेर आफ्ना विरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्न खाेजिएकाे भन्दै आफ्नो फेसबुकबाट प्रश्न उठाएका छन् ‘ के म वितिसकेको जीवन बारे आजीवन जवाफ दिएर बसुँ ? ’ सञ्चारकर्मी लामिछानेले आफुसंग सम्बन्धित विषयबारे पत्रकारिताको सामान्य धर्म पनि ननिभाइएको गुनासो गर्दै भनेका छन ‘ एक बचन मलाइ पनि सोधे म आफ्नाबारेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिन जहाँ र जहिले पनि तयार छु । ’
सञ्चारकर्मी लामिछानेले फेसबुकमा उल्लेख गरेको धारणा यस्तो छ: ‘अनलाईन खबर डट कम बारम्बार मेरो बितेको कुरा कोट्याउछ । कहिले ४ वटा बिहे भन्छ, कहिले अमेरिकाको घरको पैसा दिएन भनेर लेख्छ,कहिले छोरिहरुलाई हेरेन भन्छ । न म सङ वास्तविकता सोध्छ । एकोहोरो आरोप छाप्छ । बितिसकेको जीवन बारे मैले आजिवन जवाफ दिएर बस्ने रु सम्पादक अरुण बराल जी, मलाई थाहा छ, तपाईं जनाआस्था बाट पत्रकारिता गर्न शुरु गर्नु भएको ब्यक्ती हो।तपाइँको आदर्श जनआस्था होला र जनआस्थाका सम्पादक तपाइँका गुरु होलान । के तपाईंले मेरो करियर आफ्ना गुरुलाई गुरु दक्षिणा दिने बाचा नै गर्नु भएको हो र ? मैले ईशाजीलाई कति पैसा कसरी उपलब्ध गराए, मैले दिएको पैसा घरको किस्ता तिर्न प्रयोग भयो कि अन्यत्र प्रयोग भयो भन्ने कुरा मलाई सोध्नुस न ।
अब यहि खबरमा थप मसला हालेर नागरिकको शुक्रवार भन्नेले लेख्छ । त्यसपछि उहाँहरुको नेट्वर्कका सारा अनलाइनमा जान्छ। यति धेरै किन पछि लाग्नु हुन्छरुतपाईको सम्पादकीय क्षमता मेरा विरुद्ध नै खर्चने हो आजीवन ? अब यस्को जवाफ कति कुशलताका साथ लेख्नु हुन्छ होला।अनि यति भनेकोमा मैले कुन आपत व्यहोर्नु पर्ने हो, त्यो थाहा छैन।अर्को कुरा,भावनात्मक नाता नमरेको भए आफ्ना सन्तानका बाबू हिरासत बाट छुट्ना साथ केहीले उचाल्दैमा बदनाम गराउनु पर्ने के हतारो आइलाग्यो ईशाजी लाईरु के यी सब कुराका लागि उपयुक्त मौका यहि थियोरुमैले गलत गरे कानुन छैनरु छोरीहरुको अधिकार समेत उहाँ आफैले लिन खोज्नु भएकोले सो अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी बाटोको खोजी भैरहेको मात्र हो जुन कुरा उहाँलाई,उहाँका दाईलाई र मेरा छोरीहरुलाई थाहा छ।
कानुनी रुपम टुङ्गो लागेको सम्बन्धलाई पटक पटक उचालेर आफ्ना गुरु खुशी पार्ने काम बन्द गर्नुस अरुण बराल जी,कार्यक्रम निर्माणमा गल्ती भए,कन्टेन्टमा कुरा गरौ। पारपाचुके भैसकेकी महिलालाई उचाल्न बन्द गरौ र महिलाले पनि मिडिया बाजी बन्द गरौ। वास्तविकता त्यो होइन जुन भनियो र लेखियो।हैरान गर्नेपनि सीमा हुन्छ। कोहि देश भरी मुद्धा हाल्ने अभियानमा लाग्ने,कोहि पुराना कुरा उचाल्ने सरहरुको अरु काम छैन होला,तर प्लिज मलाई यति धेरै दुख नदिनुस। हामी सबै आ आफ्नो संसारमा खुशी छौ। ईशा जी अमेरिकामा खुशी साथ बसिरहनु भएको छ, म आफ्नो नयाँ जिवनमा खुशी छु, छोरिहरु सङ प्राय हरेक दिन कुरा हुन्छ। तपाईंलाई चाहिँ अब के चाहियो।म आज बाट कार्यक्रम शुरु गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ केही भए लेख्नु होला। नत्र पुराना र टुंगो लागेका मुद्दा उठाएर कायरताको उदाहरण नदेखाउनु होला। यो अपिल ईशा जी,अरुण जी लगायतका जीहरुलाई । धन्यवाद।’